“Rallye Matsiatra Ambony”: voalohany i Boana sy i Miangaly | NewsMada
“Rallye Matsiatra Ambony”: voalohany i Boana sy i Miangaly
Tontosa, tany Matsiatra Ambony ny asabotsy lasa teo, ny dingana fahatelo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, eo amin’ny “rallye”, nokarakarain’ny klioba Tasam. Norombahin’i Boana sy i Miangaly, nitondra ny fiara Subaru, avy amin’ny klioba FMMSAM sy ACCT, ny fandresena tamin’ity. Tontosan’izy ireo tao anatin’ny fe-potoana, 1 ora 45 mn 52 s, ny dingana manokana “ES” miisa 14, tamin’ity fifaninanana ity.
Tonga teo amin’ny laharana faharoa i Yves sy i Nitro, ekipazy avy amin’ny TMF sy Asacm, niaraka tamin’ny fiara Subaru. Tara 1 mn 30 s taorian-dry Boana ry zareo. Namarana ny lampihazo i Haja D sy i Alain, mpanamorin’ny TMF sy Asacm miaraka, nijapy ny Ssangyong Actyon, izay namita ny hazakazaka tao anatin’ny 1 ora 56 mn 28 s.
Marihina fa fiara 11, tamin’ireo 19 nandray fiaingana tany am-boalohany, sisa hany tonga hatramin’ny farany, tamin’ity. Anisan’ireo voatery nijanona ny ekipazy Ndrianja sy Fanja, izay nivadika teo amin’ny andro faharoa.
Dingana manaraka ho an’ny fifaninanam-pirenena ny “Rallye TMF”, hatao ny 25 – 27 aogositra ho avy izao.